कसले जोडिदेला कृष्णको दुई हात र एक खुट्टा ? सानो सहयोग कृष्णको लागि भगवानको रुप हुन सक्छ - Deshko News Deshko News कसले जोडिदेला कृष्णको दुई हात र एक खुट्टा ? सानो सहयोग कृष्णको लागि भगवानको रुप हुन सक्छ - Deshko News
कसले जोडिदेला कृष्णको दुई हात र एक खुट्टा ? सानो सहयोग कृष्णको लागि भगवानको रुप हुन सक्छ
के हुन्छ कस्लाई पो थाहा छ र ? अघिल्लो दिन विवाहको वर्षगाँठ, भोलिपल्ट अर्थात २६ गते जागिरमा कामको पूर्ण जिम्मेवारी पाउने दिन थियो । तर, जेठ २५ उनीहरुको जिन्दगीको कालो दिन बन्यो, नियति अर्कै बनेर आयो । रुपा र कृष्णको जिन्दगीमा बज्रपात भयो ।
उपचारका क्रममा दुई हात र एउटा खुट्टा काट्नु परेपछि कृष्ण
श्रीमती रुपाका साथ कृष्ण